Ukukhanyisa kwesiteji, amalambu ahamba phambili, amalambu wesiteji akhokhelwayo - ngale kwawo
Splicing 8 * 60W ongaphandle zoom par ukukhanyisa
Ukulungiswa okuncane nokuguquguqukayo okungasunduza noma ikuphi ubuciko bomklami kumkhawulo. Umdlalo ngamunye uza nama-8x60W RGBW LED's, futhi ungalawulwa nge-DMX noma i-RDM protocol. Okuhlukanisa ngempela lokhu kulungiswa kunoma imuphi omunye umkhiqizo ofanayo yikhono layo lokusondeza ngokuzenzakalela kusuka ku-3.5º-40º ngenkathi kukalwa ngaphandle (IP-65).
Uhlelo lokukhiya nokuhlanganiswa kokusebenza
Kuza nesiphanyeko sokukhiya esingajoyina izinto eziningana ndawonye ukudala izinhlanganisela eziningi ezahlukahlukene njengegridi engaboni, ukuhlangana okuqondile / okuvundlile ngenkathi kunikezwa amandla okwenza imephu ye-pixel yomsebenzisi. Lokhu kukwenza kube umkhiqizo oguquguqukayo ongasetshenziswa njenge-blinder, strobe, bar, noma i-pixel mapping spotlight. Okokugcina, usayizi wayo ohlangene nokwakhiwa okumangeleyo kuvumela i-Z68 ukuthi isetshenziswe cishe noma kuphi. Yamukela futhi ngezifiso ngohlaka lokukhanyisa.
I-Guangzhou Beyond Lighting Co., Limited, ingumkhiqizi okhanyisela ukukhanyisa esiteji eChina. Inomkhiqizi wokukhanyisa isiteji weminyaka engaphezu kwengu-10 onokuhlangenwe nakho okuzimele kwe-R & D, unochungechunge lwemikhiqizo egcwele egcwele emishini yokukhanyisa esiteji, ungumnikazi wemikhiqizo yochungechunge lwe-WASH eqediwe kakhulu phakathi kwabakhiqizi baseChina.
Sinezibani ezisezingeni eliphakeme nezintsha sha eziholele emthonjeni, sinakekela ukuphathwa kwekhwalithi kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva, umkhiqizo unikeza iwaranti yeminyaka emi-2.Imikhiqizo isetshenziswa ezinhlelweni eziningi ze-TV, amakhonsathi abukhoma, iSonto, Inkundla yemidlalo, i-Music Festival, i-Club, njll imicimbi & Amaphrojekthi.
I-Beyond ine-6,000 Meters workship, ulayini wokukhiqiza we-18, unyaka ngamunye cishe u-5-7 uchungechunge lwemikhiqizo emisha yethulwe emakethe. Ithimba le-R & D elizimele elinonjiniyela abayi-8 futhi ngamunye unolwazi lweminyaka engaphezu kwengu-10 embonini yokukhanyisa esiteji.
Dlulisa amehlo Beyond Ukukhanyisa Amadivayisi
Ngaphezulu kweminyaka eyishumi isiteji sikhanyisa okwenziwayo kwe-R & D, ubuchwepheshe bemikhiqizo buphansi kwezinga lemakethe laseYurophu, ukusebenzisana okucebile kweBrands kanye nokuhlangenwe nakho kokusebenza okukhulu.
I-12x40W 4-in-1 RGBW Ikhanyise ukukhanya kwesiteji sekhanda
19x15w rgbw 4in1 kwaholela ukugeza ukusondeza ikhanda elihambayo
1940Z-King Zoom 19x40W led led wash moving head 4-i ...
IP65 manzi 1728 × 0.5w rgbw 4in1 strobe ...
I-200W COB LED engenamanzi IP65 par ukukhanya
Ngaphandle kombukiso wokukhanyisa
Umbukiso ophelele wokukhanyiswa kwesiteji somthombo, umhlinzeki wokukhanyisa we-2018 Korea Winter Olympic